Unoona Kururamisira Sezvakunoitwa naMwari Here? | Yokudzidza
“Ndichazivisa zita raJehovha . . . ndiMwari akatendeka, asina kusaruramisira.”​—DHEUT. 32:3, 4.
NZIYO: 5, 46
1, 2. (a) Nabhoti nevanakomana vake vakasangana nekusaruramisira kwakaita sei? (b) Tichadzidza zvinhu zvipi zviviri munyaya ino?
MUMWE murume anopomerwa mhosva inogona kuita kuti atongerwe rufu. Hama neshamwari dzake dzinokatyamadzwa uye dzinonetseka paanonzi ane mhosva zvichibva pauchapupu hwenhema hwapiwa nevamwe varume vanozivikanwa kuti varume pasina. Vanhu vanoda kururamisira vanorwadziwa zvikuru pavanoona murume iyeye nevanakomana vake vasina mhosva vachiurayiwa. Iyi haisi nyaya yekufungidzira. Izvi zvakatoitika kumushumiri waJehovha akatendeka ainzi Nabhoti, uyo akararama paitonga Mambo Ahabhi weIsraeri.​—1 Madz. 21:11-13; 2 Madz. 9:26.
2 Munyaya ino, tichaongorora zvakaitika kuna Nabhoti uyewo zvakaitwa nemumwe mukuru akatendeka aiva muungano yechiKristu panguva yevaapostora uyo ane chikanganiso chaakaita. Patichaongorora mienzaniso iyi yemuBhaibheri, tichadzidza kuti kana tichida kuona kururamisira semaonerwo akunoitwa naJehovha tinofanira kuzvininipisa. Tichadzidzawo kuti kuva nechido chekuregerera vamwe patinoona kusaruramisira kunoitika muungano kunogona kuratidza sei kuti tinoona kururamisira sezvakunoitwa naJehovha.
KUSARURAMISIRA KWAKAURAYISA VANHU
3, 4. Nabhoti aiva munhu akaita sei, uye akarambirei kutengesera Ahabhi munda wake wemizambiringa?
3 Nabhoti ainge akatendeka kuna Jehovha panguva iyo vaIsraeri vakawanda vaitevedzera zvinhu zvakashata zvaiitwa naMambo Ahabhi nemudzimai wake akanga akaipa, Mambokadzi Jezebheri. Vanamati vaBhaari ivavo vaisaremekedza Jehovha uye vaisakoshesa mitemo yake. Asi Nabhoti aikoshesa ushamwari hwake naJehovha kutopfuura upenyu hwake chaihwo.
4 Verenga 1 Madzimambo 21:1-3. Ahabhi paakati aida kutenga munda wemizambiringa waNabhoti kana kuchinjana naye nemumwe uri nani, Nabhoti akaramba. Akarambirei? Akatsanangura zvine ruremekedzo kuti: “Handingambofungi zvakadaro, mukuona kwaJehovha, kuti ndikupei nhaka yemadzitateguru angu.” Nabhoti akaramba nekuti mutemo waJehovha wakapiwa vaIsraeri waivarambidza kutengesa nhaka yemadzinza avo. (Revh. 25:23; Num. 36:7) Zviri pachena kuti Nabhoti aiona zvinhu semaonero anoita Jehovha.
5. Jezebheri akaitei kuti aurayise Nabhoti?
5 Zvinosuwisa kuti kuramba kwakaita Nabhoti kutengesa munda wake kwakaita kuti Mambo Ahabhi nemudzimai wake vatange kuita zvinhu zvakaipa. Kuti awane munda wacho, Jezebheri akaronga kuti Nabhoti apomerwe nhema, zvikazoita kuti iye nevanakomana vake vaurayiwe. Jehovha aizoita sei nekusaruramisira uku kwakaurayisa vanhu?
6, 7. Jehovha akaratidza sei kuti anoda kururamisira, uye nei izvi zvaigona kunyaradza hama neshamwari dzaNabhoti?
6 Jehovha akabva akurumidza kutuma Eriya kuti anotaura naAhabhi. Eriya akaudza Ahabhi kuti aiva mhondi uye mbavha. Jehovha akapa mutongo upi panyaya iyi? Ahabhi, mudzimai wake nevanakomana vake vaizourayiwa sezvakanga zvaitwa Nabhoti nevanakomana vake.​—1 Madz. 21:17-25.
7 Kunyange zvazvo hama neshamwari dzaNabhoti dzakarwadziwa nekupondwa kwaakanga aitwa naAhabhi, dzakanyaradzwa nekuziva kuti Jehovha aiziva nezvekusaruramisira kwacho uye kuti akanga akurumidza kupindira munyaya yacho. Zvisinei, zvakazoitika zvinogona kunge zvakabudisa pachena kuti hama neshamwari dzaNabhoti dzaizvininipisa uye dzaivimba naJehovha here kana kuti kwete.
8. Ahabhi akaita sei paakaudzwa mutongo waJehovha, uye zvakaguma nei?
8 Ahabhi paakanzwa nezvemutongo waJehovha wakaoma, “akabvarura nguo dzake, akapfeka masaga pamuviri wake; akatsanya, akaramba akarara pasi akapfeka masaga, achifamba akasuruvara kwazvo.” Ahabhi akazvininipisa. Zvakaguma nei? Jehovha akatumazve Eriya kuti: “Nokuti azvininipisa nokuda kwangu, handizounzi dambudziko racho mumazuva ake. Ndichaunzira imba yake dambudziko racho mumazuva omwanakomana wake.” (1 Madz. 21:​27-​29; 2 Madz.​10:10, 11, 17) Jehovha, “muongorori wemwoyo,” akanzwira Ahabhi tsitsi.​—Zvir. 17:3.
9. Nei kuzvininipisa kwaigona kuchengetedza hama neshamwari dzaNabhoti?
9 Vaya vaiziva nezvemhosva yakakura yaAhabhi vakanzwa sei nezvemutongo iwoyo? Mutongo wacho, uyo waiita sewaipesana newainge wambopiwa pakutanga unogona kunge wakaedza kutenda kwehama neshamwari dzaNabhoti. Kana zvakadaro, kuzvininipisa kwaizovachengetedza, kwoita kuti varambe vakatendeka kuna Jehovha vaine chivimbo chekuti Mwari wavo haakwanisi kuita zvisina kururama. (Verenga Dheuteronomio 32:3, 4.) Nabhoti nevanakomana vake pamwe chete nehama dzavo vachaona kururamisira kwechokwadi Jehovha paachamutsa vanhu vakarurama. (Job. 14:14, 15; Joh. 5:28, 29) Uyewo, munhu anozvininipisa anoyeuka kuti “Mwari wechokwadi achatonga mabasa emarudzi ose ane chokuita nezvinhu zvose zvakavanzika, zvingave zvakanaka kana kuti zvakaipa.” (Mup. 12:14) Paanopa mutongo, Jehovha anotarisawo zvimwe zvinhu zvatisingazivi zvinobatanidzwa panyaya yacho. Saka kuzvininipisa kunochengetedza vaya vanenge vasina mhosva kuti varambe vaine kutenda muna Jehovha.
10, 11. (a) Ndepapi pangaedzwa kutenda kwedu? (b) Kuzvininipisa kuchatichengetedza sei?
10 Uchaita sei kana vakuru vakaita chisarudzo chausinganzwisisi kana kuti chausingabvumirani nacho? Semuenzaniso, uchaita sei kana ukarasikirwa neropafadzo yaunokoshesa muungano kana kuti zvikaitika kune mumwe munhu waunoda? Ko kana wawakaroorana naye, mwana wako, kana kuti shamwari yako yepedyo ikadzingwa asi usingabvumirani nazvo? Ko kana uchifunga kuti mutadzi aisafanira kunzwirwa tsitsi? Zvinhu zvakadai zvinogona kubudisa pachena kuti tinotenda muna Jehovha here uye kuti tinovimba here nemarongero aakaita zvinhu musangano rake. Kuzvininipisa kuchakuchengetedza sei kana ukasangana nemuedzo wakadaro? Ona nzira mbiri dzinotevera.
Uchaita sei kana vakuru vakazivisa chisarudzo chausingabvumirani nacho? (Ona ndima 10, 11)
11 Yekutanga, kuzvininipisa kuchaita kuti tibvume kuti hatizivi zvese zvine chekuita nenyaya yacho. Pasinei nekuti tinoziva zvakawanda sei nezvenyaya yacho, Jehovha ndiye chete anonyatsoziva zviri mumwoyo memunhu. (1 Sam. 16:7) Kuziva chokwadi ichocho chisingarambiki kuchaita kuti tizvininipise, tizive kuti tine patinogumira uye tigadzirise maonero atinoita nyaya yacho. Yechipiri, kuzvininipisa kuchatibatsira kuti tizviise pasi pevari kutungamirira uye tive nemwoyo murefu tichimirira Jehovha kuti agadzirise chero kusaruramisira kunenge kwakaitika. Bhaibheri rinoti: “Zvichafambira zvakanaka vaya vanotya Mwari wechokwadi . . . Asi hazvizombofambiri zvakanaka munhu akaipa, uyewo haazowanzi mazuva ake.” (Mup. 8:12, 13) Kuramba tichizvininipisa kunobatsira isu uye kunobatsira munhu wese anobatwa-batwa nenyaya yacho.​—Verenga 1 Petro 5:5.
UNYENGERI HWAKAITIKA MUUNGANO
12. Inyaya ipi yatichaongorora, uye nei?
12 VaKristu vemuAndiyoki yeSiriya, avo vakararama munguva yevaapostora, vakasangana nemamiriro ezvinhu aizoratidza kuti vaizvininipisa here uye kuti vaiva here nechido chekuregerera vamwe. Ngationei kuti nyaya iyoyo ichatibatsira sei kuti tiongorore maonero atinoita nyaya yekuregerera uye kuti tiwedzere kunzwisisa kuti kuregerera kwakabatana sei nemaonero anoita Jehovha kururamisira.
13, 14. Muapostora Petro akava neropafadzo dzipi, uye akaratidza sei ushingi?
13 Muapostora Petro aiva mukuru aizivikanwa chaizvo muungano yechiKristu. Aiva shamwari yepedyo yaJesu uye akanga apiwa mabasa anokosha. (Mat. 16:19) Semuenzaniso, muna 36 C.E., Petro akava neropafadzo yekuparidza mashoko akanaka kuna Koneriyasi nemhuri yake. Izvi zvaishamisa nekuti Koneriyasi aiva munhu wemamwe marudzi asina kudzingiswa. Koneriyasi nemhuri yake pavakagamuchira mweya mutsvene, Petro akati: “Pane munhu angadzivisa kushandiswa kwemvura here kuti ava vagamuchira [mweya] mutsvene sezvatakaitawo isu varege kubhabhatidzwa?”​—Mab. 10:47.
14 Muna 49 C.E., vaapostora nevakuru vaiva muJerusarema vakaungana kuti vasarudze kana zvakanga zvakakodzera kuti vanhu vemamwe marudzi vakanga vava vaKristu vadzingiswe kana kuti kuchecheudzwa. Pamusangano iwoyo, Petro akataura neushingi, achiyeuchidza hama dzaivapo kuti makore akanga apfuura, akaona vemamwe marudzi vasina kudzingiswa vachigamuchira chipo chemweya mutsvene. Zvaakataura zvakabatsira dare raitungamirira panguva iyoyo pakuita chisarudzo. (Mab. 15:6-11, 13, 14, 28, 29) VaKristu vechiJudha nevemamwe marudzi vanofanira kunge vakaonga ushingi hwakaratidzwa naPetro paaitaura nyaya iyi. Zvaiva nyore kuti vavimbe nemurume akadaro akanga akasimba pakunamata.​—VaH. 13:7.
15. Petro akaita chikanganiso chipi paaiva muAndiyoki yeSiriya? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)
15 Pashure pemusangano iwoyo wakaitwa muna 49 C.E., Petro akaenda kuAndiyoki yeSiriya. Paaiva ikoko, aiwadzana nehama dzake dzemamwe marudzi akasununguka. Hapana mubvunzo kuti vakabatsirwa neruzivo rwaPetro. Tinogona kufungidzira kushamiswa uye kurwadziwa kwavakaitwa Petro paakangoerekana arega kudya navo. Vamwe vaJudha vaiva muungano iyoyo, kusanganisira Bhanabhasi vakatevedzerawo zvakanga zvaitwa naPetro. Chii chakaita kuti mukuru iyeye akasimba pakunamata aite chikanganiso chakadaro icho chaigona kuita kuti ungano ive nemapoka? Chinokosha ndechekuti tinodzidzei panyaya iyi chinotibatsira kana tikarwadziswa nezvinenge zvaitwa kana kutaurwa nemumwe mukuru?
16. Petro akaruramiswa sei, uye mibvunzo ipi inovapo?
16 Verenga VaGaratiya 2:11-14. Petro akakurirwa nekutya vanhu. (Zvir. 29:25) Pasinei nekuti ainyatsoziva mafungiro aJehovha panyaya iyi, Petro akatya kuti vamwe vaJudha vemuungano yeJerusarema vaizomutarisira pasi nekuti aiwadzana nevanhu vamamwe marudzi. Muapostora Pauro, uyo aivapowo pamusangano wakaitwa muJerusarema muna 49 C.E., akataura naPetro muAndiyoki ndokubudisa pachena unyengeri hwake. (Mab. 15:12; VaG. 2:13) VaKristu vemamwe marudzi, avo vakavhiringidzwa nekukanganisa kwaPetro vaizoita sei nekusaruramisira kwacho? Vaizorega chikanganiso chacho chichivatadzisa kunamata here? Petro aizorasikirwa neropafadzo dzake dzinokosha muungano nekuti akanga akanganisa here?
IVA MUNHU ANOREGERERA
17. Petro akabatsirwa sei nekuregererwa kwaakaitwa naJehovha?
17 Zviri pachena kuti Petro akazvininipisa ndokubvuma kururamiswa naPauro. Magwaro haana paanoratidza kuti akarasikirwa neropafadzo dzake muungano. Akatozofemerwa kuti anyore tsamba mbiri dziri muBhaibheri. Mutsamba yake yechipiri, Petro anototaura nezvaPauro achimuti ‘hama yedu inodiwa.’ (2 Pet. 3:15) Kunyange zvazvo vanhu vemamwe marudzi vaiva muungano vakarwadziwa nekukanganisa kwaPetro, Jesu, musoro weungano, akaramba achimushandisa. (VaEf. 1:22) Saka vanhu vaiva muungano vakawana mukana wekutevedzera Jesu naBaba vake kuburikidza nekuregerera Petro. Tinovimba kuti hapana akabvumira kuti kukanganisa kwemunhu ane chivi kumutadzise kunamata.
18. Ndepapi patingafanira kuratidza kuti tinoona kururamisira sezvakunoitwa naJehovha?
18 Sezvazvakanga zvakaita munguva yevaKristu vepakutanga, hakuna mukuru asina chivi muungano yevaKristu mazuva ano, “nokuti tose tinokanganisa kazhinji.” (Jak. 3:2) Tinogona kukurumidza kubvuma pfungwa iyi, asi hazvisi nyore kana tikabatwa-batwa nezvikanganiso zveimwe hama. Pakadaro, ticharatidza kuti tinoona kururamisira sezvakunoitwa naJehovha here? Semuenzaniso, uchaita sei kana mukuru akataura mashoko anoratidza karusarura? Ucharega kunamata here kana mukuru akataura asina kufunga mashoko anokurwadza? Pane kukurumidza kufunga kuti hama yacho haichakodzeri kuva mukuru, uchamirira kuti Jesu, musoro weungano agadzirise zvinhu here? Uchashanda nesimba here kuti usaramba uchingofunga zvayakakanganisa, zvichida kuburikidza nekufunga nezvemakore akawanda ayashumira Mwari yakatendeka? Kana hama yakakutadzira ikaramba ichishumira semukuru kana kuti ikatowedzerwa dzimwe ropafadzo, uchafara nayo here? Chido chako chekuregerera vamwe chinogona kuratidza kuti unoona kururamisira sezvakunoitwa naJehovha.​—Verenga Mateu 6:14, 15.
19. Tinofanira kutsunga kuitei?
19 Vanhu vanoda kururamisira vanotarisira nguva ichabviswa zvachose kusaruramisira kunokonzerwa naSatani nenyika yake yakaipa. (Isa. 65:17) Patinenge tichimirira nguva iyi, ngatitsungei kuratidza kuti tinoona kururamisira sezvakunoitwa naJehovha kuburikidza nekuzvininipisa tobvuma kuti pane zvimwe zvatisingazivi uye toregerera vaya vanotitadzira.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Unoona Kururamisira Sezvakunoitwa naJehovha Here?